Wararka - Sannad-guurada 15aad ee Taizhou Lujury Technology Co., Ltd.
Sanad guurada 15aad ee Taizhou Lujury Technology Co., Ltd.
Wu Yunfu, oo ah gudoomiyaha Taizhou Lujury Technology Co., Ltd., iyo Zhang Juqin, maareeyaha guud ee shirkada, waxay isla soo ururiyeen wakiilo ka badan 30 alaab-qeybiyeyaal waxayna yeesheen isdhaafsi saaxiibtinimo iyo qoto dheer.
Qabsashada shirku macnaheedu maahan oo keliya in Tiknoolajiyadda Lujury ay ku soo dhaweyneyso waaga cusub muuqaal cusub, laakiin waxay sidoo kale ka dhigan tahay in LujuryTechnology ay fiiro gaar ah u yeelan doonto maareynta silsiladda wax soo saarka iyo heerka wadashaqeynta alaab-qeybiyeyaasha.
Shirkaas ayuu gudoomiye Wu Yunfu ka jeediyay khudbad aad u qiimo badan. Wuxuu mahadcelin ujeediyey alaab-qeybiyeyaasha tirada badan ee wada shaqeynta daacadda ah iyo taageerada muddada dheer ah.
Iyadoo lagu saleynayo falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan xaaladda warshadaha ee hadda jira, wuxuu soo jeediyay yoolalka iyo fikradaha horumarinta istiraatiijiyadeed ee mustaqbalka, wuxuu u ololeeyay fikirka hal-abuurka ah ee lagu xallinayo dhibaatooyinka, laguna dadaalo sidii loo gaari lahaa heerarka sare ee warshadaha. Isla mar ahaantaana, waxay soo bandhigaysaa xoogaa filashooyin iyo shuruudo ku saabsan wada xiriirka iyo iskaashiga.
Marka hore, u doode xiriir fudud oo toos ah, ha u maleynin inay wax aad u dhib badan yihiin;
Ta labaad, daacadnimada, marka ay timaado sameynta, ma iloobin wadnaha bilowga ah, sidii had iyo jeer;
Seddexaad, wada-hawlgalayaasha shuraakada waxay ku gaari karaan kaamil dhinacyada shaqadooda;
Tan afraad, xeerka anshaxa, wada shaqaynta daacadnimada ah, raadinta wax wada qabsi iyadoo la ilaalinayo khilaafaadka, isla markaana si dhakhso leh loo soo bandhigo dhibaatooyinka, si fududna loogu xallin karo waqtigeeda
Zhang Juqin, maareeyaha guud ee LujuryTechnology, ayaa khudbadiisa ku sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo alaab-qeybiyeyaasha waxtarkooda iyo dadaalkooda ku aadan tayada wax soo saarka shirkadda. Waxyaabaha ay shirkaddu soo saarto waa kuwo aan laga sooci karin qaybaha alaab-qeybiyeyaasha, qayb walbana waa dammaanadda tayada wax soo saarka.
Mrs. Zhang ayaa carabka ku adkeysay in mustaqbalka, ay xoojin doonto maareynta silsiladda wax soo saarka, ayna siin doonto fikradaha kala duwan ee fikradaha maareynta alaab-qeybiyeyaasha ah. Labada dhinac waxay si qoto dheer u wada shaqeyn doonaan si kor loogu qaado waxtarka guud ee hawlgalka ee labada dhinac, loo yareeyo kharashka hawlgalka loona abuuro ganacsi weyn. qiimaha. Waxay si adag u aaminsan tahay in kolba haddii ay shirkaddu sii kordheyso, iskaashiga labada dhinac uu isu soo dhowaan doono oo si wada jir ah u gurto miraha guusha.
Muddada cusub, Taizhou Lujury Technology Co., Ltd Association waxay si firfircoon uga jawaabi doontaa siyaasadda qaranka waxayna la jaanqaadi doontaa waqtiyada si ay gacan uga geysato horumarinta warshadaha cusub ee baabuurta korontada ee Shiinaha, iyagoo ku dadaalaya ruuxa furka iyo qabashada tayada.